इपियसपिडीत नेपालीहरूलार्इ खुलापत्र
[2013-08-08 오전 8:52:00]
म एक विदेशिएको तिमीहरुकै एउटा दाजु/भाई/साथीको तर्फदेखि हार्दिक प्रेम तथा सम्झना स्वीकार गर । आज अचानक तिमीहरुलार्इ म यो पत्र किन लेख्तैछु, त्यो म सविस्तार वर्णन गर्ने नै छु । तर त्योभन्दा पहिले म तिमीहरुलाई मेरो परिचय संक्षेपमा राख्न चाहन्छु । उमेरले म २८ बर्षको युवा हुँ । विवाहित पनि छु । अध्ययनका शिलशिलामा फिनल्याण्डमा छु । अध्ययन पनि गर्दैछु । नेपालमै बि.सं. २०६२ मा नै मैले स्नातक तह उत्तीर्ण गरिसकेको छु । स्नातकोत्तरका लागि फिनल्याण्ड, नर्वे र जर्मनी मध्य एउटा देशमा आउन चाहन्थेँ । तर ती देशका कुनैपनि विश्वविद्यालयमा मैले स्नातकोत्तरका लागि भर्ना पाइँन । कारण, यी देशमा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुनका लागि स्नातक तहको पाठ्यक्रम चार वर्षको हुनुपर्दो रहिछ । फलतः युरोपमा आएर अध्ययन गर्ने मेरो चाहनालाई साकार पार्न मैले फिनल्याण्डमा स्नातकका लागि आवेदन दिएँ । आईएलटिएस पनि गरेँ । प्रवेश परीक्षामा सामेल भएँ । र, उत्तीर्ण भएपछि यहाँ आउन योग्य ठहरिएँ । र, विभिन्न तिकडमपछि म यहाँ आईपनि पुगेँ । तिकडम यस अर्थमा कि कलेजमा नियमित शुल्क नलागे पनि खाना र बस्नको बन्दोबस्तका लागि मेरो प्रायोजन गर्ने मेरो पिताजीको नियमित आर्थिक स्रोत देखाउनु पर्थ्यो जुन न्युनतम बार्षिक १२ लाख हुन आउँछ ।
मैले भन्नै पर्ने हुन्छ - परीक्षाको तयारी, आर्थिक व्यवस्थापन र प्रवेशाज्ञा (भिषा) आवेदनका बखत मैले संघर्षका कठिनतम् दिनहरु गुजारेको छु । त्यसैले म तिमीहरुले कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नका लागि गरेको मेहनत, लगानीको मर्म पनि बुझ्दछु । म तिमीहरुको ती कठीन मेहनतको उच्च कदर गर्दछु । परन्तु, कोरियामा काम गर्नका लागि जान पाउनैपर्छ भनी कतिपय तिमीहरुले अड्डी कसेर आमरण अनसन गरेको खबर पढ्दा र आफ्नो माग पूरा नभए केहि दिनपछि नेपाल बन्दको समेत कार्यक्रम गर्ने तिमीहरुको धम्की र घुर्काइको भाषाका बारेमा थाहा पाएपछि भने केहि नलेखी रहन सकिनँ ।
विदेश तिमीहरुले सोचेजस्तो सजिलो छदै छैन । देशमै जस्तो झाराटार्ने कामले विदेशमा न कोरियन वन कमाउन सकिन्छ, न युरो न त रिंगेट नै । हुन त तिमीहरुको रुमानी कल्पनामा विदेशको झिलिमिली मात्र होला, तर नबिर्स केहिगरी तिमीहरु कोरिया पुगिनै हालेछौ भने त्यो तिमीहरुको जीवनकै कठिनतम दिनहरु हुनेछन् । हुन त म आफै नेपाल छाड्नुअगाडि निकै नै उत्साहित थिएँ । यहाँ आइसकेपछिका दुईचार दिन पनि निकै नै उत्साहित रहेँ । जब कामका लागि दौडधुप गर्न शुरु गरेँ र काम नपाएर रित्तो हात कोठामा फर्किन विवश हुन्थेँ त्यतिखेरका कुनैपनि मेरा साँझहरु ओभाना थिएनन् । हुन त तिमीहरुलाई मैले जस्तो काम खोजिरहनु पर्दैन तर काम पाएपछिको मेरो अनुभवसँग कोरियामा काम गर्न जानेहरुको अनुभूतिचाँहि थोरै भएपनि समानान्तर हुन सक्लान । त्यसकारण मैले लेख्नैपर्ने हुन्छ जुन काममा मेरो जति मेहनत अहिले बग्दैछ त्यति नै मेहनत र लगनशिलता मैले मेरै देशमा बगाउन सक्ने हो भने म निश्चिन्त छु – त्यसको प्रतिफल मैले यहाँ प्राप्त गरेभन्दा ज्यादा हुन्छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरो त म यहाँ जुन स्तरको काम गर्दैछु त्यो कामले मलाई सिकाउने केही पनि हैन तर विवशताको बाबजुद मैले काम गर्नैपर्ने हुन्छ । हुन त लागेको होला तिमीहरुले भाषा परीक्षामा शतप्रतिशत अंक ल्याएको छौं नभएपनि ९० भन्दा माथि अंक हासिल गरेका छौं, काम सहज र भव्य हुनेछ । यदि त्यस्तो सोच पालेका छौं भने मेरो विनम्र आग्रह छ – नपत्याए तिमीहरुको जस्तै अंक प्राप्त गरेर कोरियमा पसिना बगाईरहेका युवाहरुलाई सोध कि तिमीले गर्नुपर्ने काम के हो ? कति जोखिमपूर्ण काम छ त्यहाँ ? साहूले कस्तो ब्यवहार गर्दछ ? र, कति मानसिक दबदबामा बस्नुपर्दछ त्यहाँ । तिमीहरु किन अबुझ बन्छौ आखिर ? के कोरिया पुगेका सबै नेपाली युवा श्रमीकहरुको सहज दिन बितिरहेछन् त्यहाँ ? महिनौपछि सबैको छुट्टीको दिन मिलाएर उनीहरुले मनाएको छुट्टीको रमझमको तस्बीरहरु वा घुमघामको तस्बीरहरु हेरेर यदि तिमीहरुले कोरिया साँच्चीकै स्वर्ग हो भन्ने बुझेका छौ भने मेरो अनुरोध यत्ति छ – कृपया ती हसिँला तस्विरहरुमा लुकेका पीडाहरु देख्ने कोशिस गर !
मैले निर्क्यौल गरिसकेँ कि मेरो अध्ययन कार्य सिध्याईसकेपछि म यहाँ कुनैपनि हालतमा बस्दिनँ । मलाई सधैंभरी पाईखाना सोहोर्नु छैन । रातरातभरी माइनस २५ को ठिहीमा पत्रिकाहरु बाड्नु छैन । कम्मर दुख्ने गरी होटलको बिस्तरा मिलाईराख्नु छैन । नआउनु थियो आईहालेँ तर यो दलदलमा सधैं फस्नु छैन । त्यसकारण पनि मैले तिमीहरुलाई अनुरोध गर्न चाहेको हुँ – कृपया कोरिया जान पाउनै पर्छ भन्ने तिम्रो बालहठ त्यागिदेऊ । आँखा खोलेर हेर – जति पनि सम्भावना छन्- स्वदेशमै । सम्भावनाहरु पहिल्याऊ । श्रम र विवेकको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने हो भने विदेशमा आएर कसैको दास बन्नुपर्दैन, त्यहि मालिक हुन सकिन्छ । म निवेदन गर्दछु – चूनौतीहरुबाट नभाग !